Isomiso sithinta izingane eziyi-120.000 eMauritania | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izingane zithinteka kakhulu ngokushisa komhlaba. Lokhu kuyiqiniso, ngeshwa, elingenakho ukubaluleka okufanele. Womabili emazweni »athuthukile» anamagesi ayingozi akhishwa emkhathini nsuku zonke, emazweni »asathuthuka» anesomiso nezikhukhula, yibo abathola ingxenye ebi kakhulu.
Kuyiqiniso Izingane eziyi-120.000 ezivela eMauritania, izwe ebelibhekene nesomiso esibi iminyaka eminingana manje, ngokusho kweSave the Children, inhlangano engekho ngaphansi kukahulumeni ebilokhu ibasiza kusukela ngo-2006.
Kulo nyaka, i-2017, i-NGO, kanye ne-Directorate General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), Sebeke basebenza ezigodini ezingama-89 eBrakna, okungenye yezindawo ezine ezihlupheka kakhulu ezweni, besiza abantu baseMauritania abangaphezu kuka-10.000 XNUMX., eyayicishe ibe yimindeni engu-1450. Zombili lezi zinhlangano zahambisa "ukudluliswa kwemali, amakhithi enhlanzeko kanye nempuphu eqinisiwe ezinganeni ezineminyaka engaphansi kwemibili ubudala, abesifazane abakhulelwe noma abancelisayo phakathi kwezinyanga zikaMeyi no-Agasti, okuyisikhathi sezulu esomile ezweni," echaza. Londoloza Izingane.
Futhi, babambe imibhikisho yokupheka ezigodini ukufundisa ukupheka ufulawa ngendlela efanele. Umsebenzi osize omama ukuthi bafunde ukuthi ibaluleke kangakanani inhlanzeko yezitsha zasekhishini, ikakhulukazi uma banezingane ezingaphansi kweminyaka emihlanu. Baphinde bathola nezeluleko eziningi zokuvimbela ukungondleki ezinganeni zabo.
Isimo somsoco eMauritania sibucayi, futhi singaba sibi nakakhulu uma kungathathwa izinyathelo zokunciphisa umthelela wesomiso emindenini esengozini enkulu. Ukwenza noma yini, izingane ezifika ku-165.000, abesifazane abakhulelwe nabancelisayo bangahlupheka ngokungondleki okukhulu ngo-2018.
ISave the Children izoqhubeka nomsebenzi wayo wokusiza kuze kube lesi simo sixazululekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isomiso » Isomiso sithinta izingane eziyi-120.000 eMauritania
Isimo sezulu esifingqiwe sango-2017